Ugqoka umunwe womshado womfelokazi ngaphi?
Umbuthano awuqali noma uqede, ngakho-ke ukhonza njengesiginiso sokuhlala njalo futhi ukhethwa ukukhumbula ukuthembeka emshadweni. Ngayiphi umunwe isandatho somshado womfelokazi sigqoke, imibono yendabuko ihlukile ngokwembono.
Ngokufa komyeni wakhe, owesifazane anganquma ukuthi ukugqoka indandatho ayinangqondo, ngoba into engokomfanekiso ikhuluma ngesimo somshado, futhi ubuhlobo phakathi kwalabo abashadile bujulile. Kodwa uma "ulimi lwamasongo", okukhona kusukela ezikhathini zasendulo, kubalulekile kowesifazane, isiko sinquma indlela yokugqoka indandatho yomshado kumfelokazi, yize izinkomba zihluka.
Iziphi izindandatho ezithweswa abafelokazi?
Umkhosi awuhlinzeki ngemigomo eqinile, kungakhathaliseki ukuthwala indandatho nokuthi kungakanani. Owesifazane kuphela owazi ukuthi uzobhekana kanjani nosizi . Ingabe wayefuna ukuba nomkhumbuzo oqhubekayo wenjabulo elahlekile? Uma inkumbulo yowesifazane inika umfelokazi amandla okuphila, khona-ke kunezindlela eziningana zokugqoka amasongo:
Zombili izindandatho zisezintweni.
Ngakwesokudla kunomuntu siqu, nomlingani kulolu chungechunge.
Bobabili ngomunwe owodwa wesokunxele.
Iso ngakwesokunene, nomyeni ngakwesobunxele.
Uma izandla zithathwa ukugqoka izindandatho, izindandatho zivame ukugqoka ngomunwe, kanti ngezinye izikhathi zibizwa ngokuthi umunwe. Izinkolelo zasendulo zithi kule ndawo kulele umvuthwandaba oholela enhliziyweni.
Futhi, ukukhetha indlela yokugqoka kuzosithinta ubukhulu bendandatho, ngoba owesilisa uthanda kakhulu futhi udinga ukucindezeleka. Indandatho eguqulwe ngokuqinile ayikwazi ukubonwa njengento yangempela. Lesi simo asinandaba uma sigqoke uketshezi.
Ngaphambili, izindandatho zazivame ukukhethwa ngobuso obushelelezi, futhi zingacindezelwa kalula, kodwa izinhlobonhlobo zanamuhla zingaba nezakhiwo ezahlukene. Izindandatho zemishado zomfelokazi, ezinomdwebo oqoshiwe, oboshwe noma ovulekile, kunzima ukulungisa. Ukuze ungaguquki kakhulu indandatho, ukhetho lukhethwa ku-ribbon noma ngochungechunge.
Izigqoko ngesitayela se-latino
Yini okufanele ugqoke izingubo ezimnyama?
Yini okufanele ugqoke ibhulukwe elincane?
Isitayela se-safari - izingubo zasehlathini zasemadolobheni
Ngumuphi umbala i-beige ezembatho nezicathulo ezihlangene - inhlanganisela yezitayela
Kungani iphakethe elincane kwi-jeans?
Amashothikhathi aphelele - kanjani nokuthi yini okufanele ugqoke?
Ukugqoka kanjani isigqoko ngezingoma?
Indlela ukupheka okroshka on kefir?
UCate Blanchett ngesimo esibucayi seRooney Mara
Yini ongayidla imisipha ku-aquarium?
I-Slender's slimming technique
Ureaplasma kubantu besifazane - izimpawu
Ukwesaba isizungu - kubangela ukwethuka ukwesaba isizungu
Ukuqoqwa kwe-Autumn kwezingubo zabesifazane 2013
Amaphephadonga asithombe ngaphakathi kwekamelo lokulala
Ukudla kwama-American astronomers
UJessica Alba eNew York: izithombe ezinhle kanye nengxoxo encane
Amajackti wabesifazane namagebengu
Wedding Lovely Wedding 2013
Ukusetshenziswa kwe-beetle ye-bark yokuhlobisa